Rịba ama ezumike ụbọchị ọrụ
Ezigbo ndị ahịa niile akpọrọ ọnụ: Anyị ga-anọ ezumike site na Mee 1 ruo na nke 5, enwere ike ịzaghachi oge n'oge a n'ihi ịmachi ịnweta email, Anyị nwere nwute maka nsogbu nke ezumike ahụ kpatara. Biko kpọtụrụ anyị site na WeChat ma ọ bụ WhatsApp na-enweghị oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla, M ...
Key na ọnọdụ na Global Bearing Industry
Nwepu bụ ihe dị egwu nke igwe ọ bụla. Ọ bụghị naanị na ha na-ebelata esemokwu kamakwa ha na-akwado ibu, na-ebunye ike ma na-enwe ndọtị ma si otú a na-enyere ndị ọrụ aka ịrụ ọrụ nke ọma. Ahịa Global Bearing dị gburugburu $ 40 ijeri ma na-atụ anya iru $ 53 Billion by 2026 with a ...
17th, Feb 2021 Malite Rịba Ọrụ
site ha na 21-02-18
Ezigbo ndị enyi, Ebe ọ bụ na anyị gafere ezumike ogologo site na 1st, Feb ruo 17th, Feb n’ihi ezumike ezumike nke mmiri nke China. Ugbu a, anyị mechara ezumike ahụ ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ ịmalite ọrụ anyị na 17th, Feb 2020. Nnabata ndị enyi si ụwa wee soro anyị kparịta azụmahịa. Anyị ga provice kacha mma mma, pr ...
Etu esi nwalee ogo mmanu?
Countriesfọdụ mba na-esiri ike ịnwale ogo abụba site na akụrụngwa, anyị na-ahọrọ ụzọ dị mfe iji nwalee ogo gị, iji mee ka ị mara maka ogo abụba anyị. Taa, anyị na-vidiyo banyere anyị griiz quality ule, ị nwere ike ịlele gị ngwaahịa mma na iji tụnyere anyị! Ihe magburu onwe ya ...
Ohiri isi ngọngọ amị
The anụ ụlọ ọkachamara emeputa Ohiri isi Block agba nwere ihe karịrị afọ 20 nke ahụmahụ.
Multipurpose Lithium Base Grease Drop Point Karịa 180 ℃ 180kg Drum
Felicia na-ewebata ngwaahịa.
MULTIPURPOSE LITHIUM BASE GREASE NLGI3 mp3 DỌPOTOTA Ihe karịrị 180 ℃ MULTIPURPOSE CALCIUM BASE GREASE NLGI3 mp3 DROP POINT 100 ℃ BLUE HIGH TEMPERATURE GREASE (HP) DROP POINT MORE THAN 290 ℃ 100,000
E zigara ngwaahịa ndị ahụ n'ụwa.
1 * 40ft akpa + 1 * 20ft akpa ibu zigara na-adịbeghị anya. Ndị ahịa ahụ juru afọ. Tụkwasa anyị obi, kwado anyị, ọ ga-etozu.